Malunga nathi -FUJIAN YUANHUA Pump Pump INDUSTRY CO., LTD
Umcoci wamanzi wempompo ye-RO
Impompo epholileyo yomoya
FUJIAN YUANHUA Impompo INDUSTRY CO., LTD
Siyi studio yoyilo ekholelwa kumandla oyilo olukhulu.
I-FUJIAN YUANHUA PUMP INDUSTRY CO., LTD yamiselwa eFujian ngo-2009, eyinkxaso mali epheleleyo yeQela le-PEAKTOP elidweliswe eHong Kong (SEHK ikhowudi yesitokhwe: HK0925). Iqela le-PEAKTOP lasekwa ngo-1991, ikakhulu lijongana nezipho kunye nomsebenzi wasekhaya.
Nangona kunjalo ngoku i-subsidiary-i-YUANHUA isebenza ikakhulu kuphando kunye nokuphuhlisa, ukuvelisa kunye nokuthengiswa kwempompo engenamandla ye-AC, impompo yamanzi elanga DC, impompo engenamanzi ye-DC njl njl. Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwimithombo yobugcisa, imiyezo yegadi, ukunkcenkceshelwa kwegadi, iimoto, izixhobo ezijikeleza amanzi ngokuzenzekelayo, iimveliso zelanga (umthombo wokuhlamba intaka), iitanki zentlanzi zasemanzini, izixhobo zokuhlamba iinyawo, umoya opholileyo. Ngapha koko sidibanisa iimveliso ezintsha ezinjengempompo yokuhambisa amanzi kumatshini wokuhlamba kunye nempompo ye-RO yokucoca amanzi.
Inkampani yethu ifumene i-ISO9001: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho ka-2008, kwaye silandela ngokungqongqo le nkqubo yomphathi. Iimveliso zivunyiwe yiCCC, i-ETL, i-UL, i-CUL, i-CE / i-GS, i-ROHS, i-SAA njl. Njl. Ezinokuhlangabezana neemfuno zamazwe amaninzi emhlabeni. Siye saseka ubudlelwane ishishini ixesha elide kunye nozinzo kunye namanye amashishini ezinkulu zasekhaya.
Sineempawu ezimbini "i-PEAKTOP" kunye ne "YUANHUA" yeempompo zethu ezingaphantsi. Phantse iminyaka engama-20 yamava kunye nomgangatho ogqwesileyo, sinedumela eliphezulu kolu shishino. Sichazwe njengomthengisi wemveliso yeempompo ezinokuntywiliselwa kuninzi lweshishini levenkile ezinkulu. Ngalo lonke ixesha umgaqo "Umgangatho wokuqala, abaThengi kuqala", sifumana impendulo rhoqo kunye nekhredithi kumazwe aphesheya nakwimakethi yasekhaya.
Ukuze siphuhlise ngokuqhubekayo iimarike zamanye amazwe, sithathe inxaxheba kwiCanton Fair minyaka le kwaye ngamanye amaxesha kwiMithombo yeHlabathi yeHong Kong Electronics Show. Yiza neemveliso ezintsha zenkampani ekunxibelelaneni ubuso ngobuso nabathengi abatsha nabadala phesheya, phulaphula izimvo zabathengi kunye neengcebiso, kwaye uqhubeke uphucula iimveliso. Ukwaneliseka kwabaThengi yinjongo yenkonzo yethu.
Ukongeza, ukucebisa ixesha labasebenzi kunye nentlalontle, inkampani yethu inika izipho zemihla yokuzalwa kunye namaqela afanelekileyo kusuku lokuzalwa komqeshwa ngamnye. Inkampani yaseYuanhua iya kwezinye iindawo zokhenketho ukuhamba amaxesha ama-2-3 ngonyaka. Phambi koMnyhadala weNtwasahlobo kukho isidlo esikhulu kunye nelothari minyaka le, kwaye ikwangumbulelo wonyaka kunye nomsitho wokuphendula ukuveza unyaka wonke wezemali kubasebenzi benkampani.
Phantse iminyaka engama-20 yamava kunye nomgangatho ogqwesileyo, sinedumela eliphezulu kolu shishino.
-Umgangatho wokuqala, abaThengi kuqala
Umnxeba:0086 595 87298199
UWhatsapp: +86 13599221865